Shina 2BEX Series Rindran'ny rano vakoka mpanamboatra pump KAIQUAN
2BEX andiany rano amin'ny paompy vakoka no miorina amin'ny zava-bita fikarohana siantifika an-taonany sy traikefa amin'ny famokarana ao amin'ny orinasanay, natambatra miaraka amin'ny haitao mandroso amin'ny vokatra iraisampirenena mitovy amin'izany.
2BEX andiany rano amin'ny paompy vakoka no miorina amin'ny zava-bita fikarohana siantifika an-taonany sy traikefa amin'ny famokarana ao amin'ny orinasanay, natambatra miaraka amin'ny haitao mandroso amin'ny vokatra iraisampirenena mitovy amin'izany. Aorian'ny fikarohana sy famakafakana ny tsena dia novolavolaina ny vokatra avo lenta sy angovo. 2BEX andiam-baravarankely rano vovoka vovoka, ny fitaovana miasa dia rano madio ny mari-pana, manaiky ny karazana tokan-tena mihetsika ny dingana tokana, manana tombony amin'ny firafitra tsotra, azo antoka azo antoka, fahombiazana ambony ary famonjena famonjena, ny fantsom-bolo dia rafitry ny parisisa, mety ho fametrahana sy fikojakojana ny mpampiasa. Araka ny filànan'ny mpampiasa dia misy ny fiara mitondra fiara, fiara mitondra maotera ary mena moto.
Taorian'ny fanamboarana tamim-pitandremana sy fanaraha-maso kalitao tonga lafatra, dia tonga amin'ny ambaratonga lehibe any Shina ny vokatra. Ny orinasanay dia nahazoana ny fanamarinana kalitaona ISO9001. Azo antoka tsara ny kalitaon'ny vokatra.
Ity vokatra andiany ity dia hanaraka ny fenitra GB7255-2007, GB / T 13929-2010 ary GB / T 13930-2010.
Io vokatra io dia be mpampiasa amin'ny fanaovana pirinty, sigara, parasy, fanaovana siramamy, lamba-lamba maivana, sakafo, metallurgiora, fanodinana mineraly, fitrandrahana, fanasana arintany, zezika simika, fametahana menaka, indostrian'ny simika, hery ary indostrialy elektronika. Ampiasaina amin'ny fandroahana ny vakoka, fitrandrahana vakoka, fiverenan'ny vatan'ny vakoka, ny fametrahana ny vakoka, ny fanamainana ny vakoka, ny fofona vakoka, ny fanadiovana ny vakoka, ny fitaterana ny vakoka, ny simulasi vakoka, ny fanarenana ny entona, ny fametrahana ny vakoka ary ny dingana teknolojia hafa. Ampiasaina izy ireo manapotika entona mandrehitra tsy misy rano ao anaty rano ary tsy ahitana singa mivaingana, mba hamolavola banga ao anaty rafitra voatondraka. Mandritra ny fandidiana dia mihosona ny entona entona, ary tsy misy vy manelingelina ao anaty ny voatavo, ka mety amin'ny fantsom-bazom-pandrefesana, mipoaka na decomposed gas raha misy ny fiakaran'ny mari-pana.
Ny mpanondrana entana sy ny vatan'ny pump dia voalamina tsara, ny tendrony roa dia voafatin'ny mpaninjara, ary arotsaka ao anaty voatavo ny andaniny roa. Rehefa mihodina ny mpanondrana, dia ny kavina vita amin'ny ranon-tsolika mitovitovy amin'ny halehiben-doko izay mitovy aminy ihany no miorina eo amin'ny rindrin'ny rindrin'ny paompy. Ny haavon'ny anatiny amin'ny kaontin'ny ranon-javatra, ny velaran'ny haben'ny impeller ary ny endriny farany amin'ny mpaninjara dia mamorona lava-bato miasa miendrika crescent, izay mizara ho sakana maromaro samy hafa habe amin'ny alàlan'ny tadin-tsofina. Rehefa mihodina ny mpanondrana, mihena tsikelikely ny habetsaky ny lavaka kely eo amin'ny sisin'ny fantsom-pahazavana, mihena ny tsindry amin'ny havoana, mihena ny valan-drivotra avy amin'ny sisiny ivelany amin'ny alàlan'ny famoahana, ary ny gony dia mihodina mankany amin'ny fivoahana tsikelikely, ny haavon'ny mihena tsimoramora ny gony ary voatsindry ny entona Rehefa tonga ny tsindry amin'ny rivotra, dia alefa amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo ny entona, ka mahafeno ny fizotran'ny fizotran'ny fizotrana sy ny fanamafisana ary ny harerahana. Mandritra ny fandidiana, ny ampahan-tsolika miasa dia alefa miaraka amin'ny entona, ka ny ranon-tsoavaly vaovao dia hatsangana tsy tapaka ao anaty paompy. Ho azo antoka ny fampandehanana ny paompy.
Ny fitaovana miasa dia matetika rano madio amin'ny mari-pana mahazatra.
Avy amin'ny làlamby moto dia mihodina amin'ny famantaranandro ny mpanala. Araka ny takian'ny mpampiasa dia azo ovaina ny làlan'ny fihodinana hanoherana ny famantaranandro.
Previous: YS Fitaovana famandrihana rano Vacuum
Manaraka: Baolina mavesatra 2BEK Series Water Water Pumps